अराजक शब्दहरु: October 2018
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 9:57:00 PM No comments:
संघीयतामा आधारित संविधानको मर्म
१. वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अंगीकार गरेको छ । नेपालमा लागू भएको संघीयताको मूल मर्म राज्यका शक्ति र अधिकारको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा समुचित बाँडफाँड गर्नु हो ।
२. यो अधिकारको बाँडफाँडको सिद्धान्त कुन–कुन विकास निर्माणका काम राष्ट्रियस्तरको हो, कुन प्रदेशस्तरको हो र कुन स्थानीयस्तरको हो भनी पहिचान गरेर सो काम सोही तहको सरकारबाट सम्पादन गर्ने हो । यसैगरी आमजनतामा प्रवाह हुने सेवाहरू के–कति कारण र आधारले कुन सेवा संघीयस्तरबाट, कुन सेवा प्रदेशस्तरबाट र कुन सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्दा जनतालाई पायक पर्छ भनी अधिकारको बाँडफाँड गर्ने हो ।
३. जनजिब्रोको सहजताका लागि सिंहदरबार गाउँमा आयो भनिएको हो । तर, समग्र मुलुकको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, नोट छाप्ने काम, राहदानी जारी गर्ने काम, केन्द्रीयस्तरको कर संकलन, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको सञ्चालन संघीय सरकारबाटै हुन्छ । यी कुरामा सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमै छ, गाउँमा आएको छैन ।
४. यसैगरी प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था, प्रदेश विश्व विद्यालयको सञ्चालनलगायत संविधानको अनुसूची ६ मा वर्णित अधिकारहरू सिंहदरबारबाट गाउँमा होइन, प्रदेशमा आएका छन् ।
५. यसै सन्दर्भमा संविधानको अनुसूची ८ मा लेखिएका २२ प्रकारका अधिकारहरू, जो साबिकमा सिंहदरबारमा थिए, ती गाउँमा आएका छन् । संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको साझा अधिकारको सूचीबाट पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार स्थानीय तहमा थप अधिकार प्राप्त भएका छन् । यसरी संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरेको पहिलोपटक हो, जो सबै नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । यसलाई संस्थागत गरी जगेर्ना गर्ने कर्तव्य हामी सबैको हो ।
सत्र वर्ष नतिरेको कर तिर्नुपर्ने भयो
१. हाल गाउँमै सिंहदरबार आयो भनिएको छ । यसरी गाउँमा सिंहदरबार आउँदा अधिकार मात्रै आएको छैन, कर्तव्य पनि साथमै आएको छ । करिब १७–१८ वर्ष स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । जसका कारण जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाउन सकेका थिएनन् र तिर्नुपर्ने कर पनि तिर्नुपरेको थिएन ।
२. सो बखत गाउँपालिकाका सचिव सदरमुकाममा बस्थे, जसका कारण सेवा लिन सदरमुकामको होटेलमा सचिव खोज्दै हिँड्नुपरे पनि आमजनताले कर तिर्न सचिव खोज्नुपर्ने बाध्यता थिएन ।
३. नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत र जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीले स्थानीय तहका नेताहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्थे । ती नेताहरूले कर्मचारीलाई कर उठाउनु पर्दैन भन्दै केन्द्रबाट आएको रकम बाँडफाँड गर्न उक्साउँथे ।
४. यस कुरामा अभ्यस्त जनताले हालका पालिकाहरूसँग पनि वडागत र टोलगत रकम बाँडफाँडको माग गर्दै कर नउठाउन घोषित–अघोषित आग्रह गरिरहेका छन् ।
५. यस स्थितिलाई गम्भीरतासाथ मनन्, चिन्तन गरेर पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधि अघि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू पनि चनाखो हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको करको आलोचना
१. हाल पालिकाहरूले लगाएका करका विषयमा अनेक चर्चा भइरहेका छन् । केहीले प्रश्न उठाइरहेका छन्, पहिला सेवा कि कर ? निश्चय पनि जवाफ हुनेछ, पहिला सेवा ।
२. जनताले अपेक्षा गरेको सेवा भनेको के ? चौबीसै घन्टा वडा कार्यालय खुलोस् । अपेक्षित सेवा बिहान–बेलुकी पनि पाइयोस् । गाउँ र सहर सफा होस् । सूर्य नउदाउँदै फोहोर गायब भइसकोस् । पूरै गाउँ र सहर हरियालीले छाओस् । सबै बस्तीका सडकमा राति झलमल्ल बत्ती बलून् । सबै बाटो पिच होस्, धुलो नउडोस् । सबै कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा प्राप्त होस्, लोडसेडिङ नहोस् । कुनै पनि अभिभावकले बच्चालाई स्कुल र कलेजमा पठाएबापत कुनै दस्तुर तिर्नु नपरोस् । रोग लाग्दा निःशुल्क उपचार पाइयोस् । बुढेसकालमा महिनाभरि मनमौजीले खर्च पुग्ने गरी वृद्धभत्ता बुझ्न सकियोस् । जताततै खुला क्षेत्र हुन् । बाल बगैँचा होस् । वृद्धाश्रम बनोस् । वाचनालयमा गएर पढ्न पाइयोस् । जिमखानामा गएर शरीर तन्काउन पाइयोस् । गाउँमै म्युजियम, चिडियाखाना हुन् । कुनै पनि वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा कमी महसुस नहोस् । निजी मोटर, मोटरसाइकल निर्बाध चलाउन पाइयोस्, कर तिर्नु नपरोस् आदि–इत्यादि जनताका इच्छा छन् ।
३. यी सबै आफैँमा अपेक्षा गर्न नपाइने विषय भने होइनन् । विकसित मुलुकका जनताले यी र यीबाहेकका अतिरिक्त सेवा–सुविधा पाइरहेका छन् ।
४. तर, ती विकसित मुलुकका जनताले प्रत्यक्ष कर तिर्नुपरेको अनुभूति गरेका छैनन् । जनताबाट कर असुली नगरी यी सेवा निःशुल्क प्रवाह गर्न कसरी सक्षम हुन सकिन्छ ? के यो असम्भव विषय हो ? यी कुरामा पालिकाहरू घोत्लिन जरुरी छ ।
५. नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ खडा भएका छन्, सम्भवतः यी संयन्त्र नै यस्ता चिन्तनका मुख्य थलो हुन सक्छन् । यस्ता विषयमा विज्ञहरूको राय सुझाब पनि लिनुपर्छ ।
संघीय बजेटमा नबोल्ने स्थानीय बजेटको उछितो काढ्ने
१. नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष असुली गर्ने राजस्वको आकार बढाउँदै लगेको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संघीय सरकारले करिब साँढे नौ खर्बबराबर राजस्व असुली गर्दै छ । यो लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो ।
२. यसरी संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत भएका २–४ दिन केही अर्थशास्त्रीले मुख खोले । केही लेख छापिए । संसद्मा विपक्षीले आफ्नो धर्म निर्वाहस्वरूप विरोध गरेझैँ गरे । तर, संघीय सरकारको बजेट पारित भयो ।
३. प्रदेश सरकारले केही करोडमा मात्रै करको अपेक्षा गरेजस्तो लाग्छ । खासै मानिसको ध्यान प्रदेश सरकारको करमा गएको छैन ।
४. नेपालमा रहेका ७५३ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको राजस्व लक्ष्यको करिब १० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब राजस्व पनि उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, हेर्न बाँकी नै छ । तर, स्थानीय तहले लगाएको करले समाचारमा राम्रै स्थान पायो ।
५. जसअनुसार करको कहर, परेवा र कुखुरामा पनि कर, जताततै करको लफडा, मरेको बाख्रामा कर, करमा गलत कदम, करको बोझले जनता आक्रोशित, करको कचकच र करमा करकरले संघीयताप्रति निराशासम्मका समाचार र लेखका शीर्षक बनेका छन् । यसैगरी तहपिच्छे फरक दस्तुर, करमा मनोमालिन्य, नागरिकलाई कर, नेतालाई कार, पोहोर डेढ सय यसपालि अठ्तीस सय पचास, सुविधा सिटामोल नि छैन, तिर्नु छ करमाथि कर, कर बढ्यो, सुविधा बढेन, कृषि उपजमा पनि कर, करको बबन्डर, करको झमेला, करकापपूर्ण कर, करको भद्रगोल र नयाँ कर आतंकसम्मका शीर्षकका समाचार र विचार छापिएका छन् । यसबाट स्थानीय तहहरू गम्भीर हुनैपर्छ । कहीँ कतै कमी–कमजोरी भएको भए सच्याउन पनि तयार हुनुपर्छ ।
तीन तहको सरकारको कर उठाउने अधिकार
१. वर्तमान नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारमा अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । जसअनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । जसको चौथो नम्बरमा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड–जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन लेखिएको छ । यी कर स्थानीय तहले उठाउन पाउनेछन् ।
२. यसैगरी संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीको नं. ४ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना लेखिएको छ । यी कर प्रदेश सरकारले उठाउन पाउनेछन् ।
३. यसैगरी संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकारको सूची छ । जसको ९ मा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना लेखिएको छ । यी कर संघीय सरकारले उठाउन पाउनेछन् ।
४. यसरी संविधानको अनुसूचीको अध्ययन गर्दा करको नामसहित नै तीन तहका सरकारले कर उठाउने अधिकार पाएका छन् । संघीय सरकारको कर शीर्षक र प्रदेश एवं स्थानीय तहको कर शीर्षकमा खासै द्विविधा छैन, ती फरक छन् ।
५. तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउने करको शीर्षक लगभग उस्तै छ । जसका कारण केही द्विविधा सिर्जना भएको छ । यसरी संविधानमै रहेको द्विविधाको दोष स्थानीय सरकारलाई मात्रै थुपार्नु हुँदैन ।
स्थानीय सरकारले कर लगाउने अधिकार
१. करिब एक वर्षअघि संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा सहजता दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ जारी भएको छ ।
२. यस ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार तोकिएको छ । जसको उपदफा (२) को प्रकरण (घ) मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरको विस्तृतीकरण गरिएको छ ।
३. साथै उपदफा (४) मा संघ र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको थप काम, कर्तव्य र अधिकार सोही उपदफाको प्रकरण (घ) मा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी थप विस्तृतीकरण गरिएको छ ।
४. यिनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर स्थानीय तहले कर असुली गरेमा कानुनसम्मत हुनेछ ।
५. यिनै परिवेशमा आमजनताले पनि स्वीकार गर्ने सिद्धान्ततर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको उजागर गर्छु, जसलाई स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारलाई करसम्बन्धी सुझाब
१. जनप्रतिनिधिको उपस्थिति र अनुमोदनबेगर कर लगाउन नपाइने सिद्धान्त सबै पालिकाले पालना गर्नुपर्छ । यसका लागि हरेक वर्ष व्यापक छलफलसहित करका दर पारित गर्नुपर्छ । यस्तो कर लागू गर्नुपूर्व आममतदाता जनतालाई वडा–वडामा भेला गराई जनमतसंग्रह गर्न पालिकाहरू उत्सुक हुनुपर्छ ।
२. संविधान र कानुनमै के–के शीर्षकमा कर उठाउन पाइन्छ भनी लेखिएकाले सो शीर्षकबाहेकका कर उठाउन मिल्दैन । नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारमा मात्रै निहित छ । पालिकाहरूले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । मेरो बुझाइमा ०५५ सालमा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासनलाई आधार मानी करको दर प्रस्ताव गर्दा केही पालिकाहरू ‘नाजवाफ’ हुनुपरेको हो ।
३. तीन तहका सरकारले एउटै शीर्षकमा दोहोरो–तेहोरो पर्ने गरी जनतासँग कर उठाउन मिल्दैन । आपसमा समन्वय गरेर एउटा सरकारले कर उठाउने र आपसमा वितरण गर्नुपर्छ ।
४. करको दर बढाउने होइन, दायरा बढाउनुपर्छ । जो करको दायराभित्रै छन्, उसैलाई करको दर बढाएर करको भार थोपर्नुको सट्टा कर नै नतिरेर करको दायराबाहिर बस्नेलाई करको दायराभित्र ल्याउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
५. जुन उद्योग, व्यापार वा कारोबार कुनै पालिकाभित्र भएकै छैन भने यस्तो क्षेत्रमा कर असुलीको घोषणा गर्ने होइन, कर छुटको स्किम ल्याउनुपर्छ । हुँदै नभएको कारोबारमा कर घोषणा गर्दा केबल ‘बदनाम’ मात्रै भइन्छ, रकम असुली हुँदैन ।
६. संघीय संरचनामा जनतासँग कर उठाउन स्थानीय तहहरू संवेदनशील हुनैपर्छ । उनीहरूले मदिरा, चुरोट र बिलासिताका सामानमा मजाले कर लगाए हुन्छ । तर, आमजनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर लगाउँदा ‘होस’ पु-याउनैपर्छ ।
७. कुनै पनि कर उठाउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । हाटबजारमा बिक्री गर्न ल्याएको सामानमा कर लगाउनु स्वाभाविकै हो । तर, सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा पालिकाहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । हाटबजार लाग्ने ठाउँ नगरपालिकाको स्वामित्वको स्थान हो, त्यसको भाडा उठाएका हौँ । हाटबजार लाग्ने ठाउँको सफाइ गर्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले कर उठाएको हो । यसरी उठेको करबाट सोही हाटबजार लाग्ने ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौँ । यसरी हाटबजारबाट उठेको करको छुट्टै कोष खडा गरेका छौँ । यसबाट तलब लिने, बैठक भत्ता खाने होइन भनी आमजनतामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । साथै वस्तु बिक्री नभए कर तिर्नु नपर्ने कुरा बताउन पछि पर्नु हुँदैन ।
८. पालिकाहरूले आँखा चिम्लिएर जे–जस्तो सिफारिस जारी गर्दा पनि दस्तुर लिएका कारण असजिलोमा परेका हुन् । वर्षांै वर्षदेखि हराएर घर फर्किएको मानिस नेपालमै २–४ जना होलान्, तिनको सिफारिसमा दस्तुर नलिनु नै बेस हुनेछ । साह्रै अतुलनीय काम गरेर विश्वस्तरको पुरस्कार सिफारिस गर्दा पालिकाहरूले गर्व गर्ने हो, दस्तुर लिने होइन । यसरी कुरो नबुझ्दा पालिकाको कोषमा रकम आएको पनि छैन, आलोचना रोकिएको पनि छैन ।
९. करका विषयमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघले विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सबै पालिकाहरूलाई उचित मार्गमा हिँडाउन विशेष पहल गर्न जरुरी छ । यसै पंक्तिकारले पनि विभिन्न पालिकामा पुगी प्रत्येक कर शीर्षकका सिद्धान्तको व्याख्या गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सघाइरहेको छ । यसरी पालिकालाई सघाउनेहरूको कमी छैन । पालिकाहरूले सहयोग लिन पनि जान्नु प-यो ।
१०. अब पालिकाहरूले राजनीतिमा कम तर, विज्ञता, दक्षता र अनुभव बढाउने कुरामा बढी ध्यान दिन जरुरी छ । हाल पालिकाहरूले लगाएको करबाट केही स्थानमा भएको त्रुटि सच्याएरै जनताको मन जितेर आफूलाई साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिई मुलुकभरिका ७५३ पालिकाहरू पूर्ण रूपमा सफल भई मुलुकको समृद्धिका बाहक हुनुपर्छ, साथै सबै नेपालीले मन, वचन र कर्मले पालिकाहरूलाई सघाउनुपर्छ ।
करसम्बन्धी पालिकाका आलोच्य निर्णयहरू
मरेको बाख्राको बिमा दाबी गर्न सिफारिस गर्दा २५०।– दस्तुर लिने
– गौरादह नगरपालिका, झापा ।
हाटबजारमा बिक्री हुने कुखुराबापत ३, परेवामा २, बाख्रामा ७, पाठामा ७, गाईगोरुमा १०, बाँसमा प्रतिघना २ रुपैयाँ कर लिने
– अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा ।
बेपत्ता भएको भनिएको व्यक्तिलाई जीवित प्रमाणित गर्न पाँच सय र दुई सय दस्तुर लिने
– आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम र सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम पूर्व ।
गरिबी प्रमाणित दस्तुर रु. पच्चीस लिने
– आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम ।
विवाहित वा अविवाहित प्रमाणित दस्तुर रु. एक हजार र दुई सय लिने
– आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम पश्चिम ।
हाटबजारमा मकै पोलेर बेच्नेसँग दैनिक रु. पैंतालीस कर लिने तथा हाँस, कुखुरा र परेवा बिक्रीको प्रतिगोटा रु. सोह्र कर उठाउने
– तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही ।
भै‌सी बिक्रीमा रु. एक हजार कर लिने तथा प्रतिखसी बिक्रीमा रु. एक सय पचास कर लिने
– त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा ।
हाटबजारमा डोकोमा राखेर साग बेच्नेसँग दैनिक रु. पै‌तीस कर लिने
– सिद्धार्थ नगरपालिका, रुपन्देही ।
हजामबाट दैनिक बीस, चनाचटपटेबाट तीस, मेहदी लगाउनेबाट दश र चटक देखाउनेबाट बीस रुपैयाँ
– बुढीगंगा गाउँपालिका, मोरङ ।
भाडामा बस्ने विद्यार्थीले प्रतिमहिना ५० प्रतिशत छुट पाएर रु. पच्चीस फोहोर कर तिर्नुपर्ने तथा हाटबजारमा खुला रूपमा तरकारी बेच्नेसँग दैनिक रु. बीस कर लिने
– बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही ।
बन्दिपुर बजार क्षेत्रमा फिल्म सुटिङ गरेबापत प्रतिदिन रु. एक हजार कर उठाउने
– बन्दीपुर गाउँपालिका, तनहुँ ।
आप्mनै बारीको रूख काट्न सिफारिस गरेबापत रु. दुई सय दस्तुर लिने
– कुम्पाक गाउँपालिका, पाँचथर ।
क्यारेमबोर्ड खेलाउने पसलले वार्षिक रु. एक हजार कर तिर्नुपर्ने
– मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ ।
गुम्बाले विविध शीर्षकमा गरी वार्षिक करिब रु. दुई लाख कर तिर्नुपर्ने
– दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाडौं ।
चटपटे र बदाम बेच्नेसँग दैनिक रु. बीस र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापारीसँग रु. तीस कर उठाउने
– गोदावरी नगरपालिका, कैलाली ।
कर उठाउनुपर्ने जनतासँग सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम कट्टी गर्ने
– कार्मारोङ गाउँपालिका, मुगु ।
आप्mनै बारीको रूख काट्नुपर्दा रु. पाँच सय र हाँगा काट्दा रु. दुई सय कर तिर्नुपर्ने
– भेरी नगरपालिका, जाजरकोट ।
प्रतिकुखुरा रु. बीस र प्रतिअन्डा रु. एक कर लाग्ने
– धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली ।
इवा, मेवा र काबेली खोलामा माछा मारेबापत वार्षिक एकमुष्ठ रु. डेढ लाखको ठेक्का लगाउने तयारी गर्ने
– यङबरक गाउँपालिका, पाँचथर ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 7:23:00 PM No comments:
राज्य सञ्चालनको लागि वित्तीय श्रोतको आवश्यकता पर्छ । राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण सरकारी वित्तका प्रमुख स्रोत हुन् । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता मूूलतः नगद, शोधभर्ना र सोझै भुक्तानी विधिबाट सहायता प्रदान गर्दछन् ।
शोधभर्ना वैदेशिक सहायता भएको आयोजनामा दातृ निकायबाट बेहोरिने रकम सुरुमा नेपाल सरकारको श्रोतबाट खर्च गरी उक्त रकम दातृ निकायबाट सहायता प्राप्त गर्ने एक विधि-माध्यम शोधभर्ना हो । शोधभर्ना लिन बाँकी रकम समयबद्ध रूपमा शून्य हुँदा सरकारलाई नगद व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भने आर्थिक प्रशासनमा सम्बद्ध कर्मचारीको कार्य सम्पादनस्तर अब्बल भएको ठानिन्छ ।
विनियोजन ऐन, २०७५ अनुसार नेपाल सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चका अलावा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वार्षिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने रकमको एक चौथाई सशर्त तथा समानीकरण अनुदान साउन महिनामै तत्तत् तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पहिलो चौमासिकमा सरकारी राजस्व परिचालन पनि कम हुने र सुरुदेखिनै आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै महँगो व्याज तिर्नुपर्दा नेपाल सरकारलाई सुरुदेखि नै नगद व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्ने अवस्थामा मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न आयोजनामा शोधभर्ना लिन बाँकी रकम रु.४८.३९ अर्ब (प्रारम्भिक) यथाशिघ्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको नगद व्यवस्थापनलाई सहज पार्ने महत्वपूर्ण विकल्पको रूपमा लिन र वित्तीय सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिननेपाल सरकार (महालेखा नियन्त्रकस्तरीय)को मिति२०७५ साउन ८ गतेको निर्णयअनुसार शोधभर्ना प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि स्वीकृत गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, बजेट व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मलेनिका बजेट कार्यान्वय शाखा प्रमुख, शोधभर्ना लिन बाँकी मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुखहरू सदस्य र बजेट कार्यान्वय शाखा, मलेनिकाका लेखा अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी शोधभर्ना प्रभावकारी बनाउन कार्यदल गठन गरियो । उक्त कार्यदल गठनको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्मको शोधभर्ना लिन बाँकी रकमलाई पहिलो चौमासिक भित्र प्राप्त गर्ने र बन्द आयोजनाको रकम फरफारक गर्न आवश्यक प्रयत्न र समन्वय गर्नु थियो । कार्यदलले उक्त कार्य सम्पादन गर्न लिइएका रणनीतिमा (क) शोधभर्ना बक्यौता रकम बढी भएका मन्त्रालय-विभाग-आयोजनाहरू पहिचान गर्ने (ख)पहिचान भएका मन्त्रालय-विभाग-आयोजनाका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखसँग आवश्यकता बमोजिम बैठक बसी समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गर्ने र (ग) आवश्यक परेमा आयोजना प्रमुख-विभाग-मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एवं दातृ निकाका प्रतिनिधि सहितको बैठक बसी आवश्यक समन्वय गर्ने रहेको थियो ।यसैगरी कार्य सम्पादनमा अपनाएका कार्यनीतिमा (क)पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी शोधभर्ना बक्यौता भएका दश वटा आयोजना-विभाग-मन्त्रालय लगायतका निकायहरूसँग आवश्यक छलफल, समन्वय र यथाशिघ्र प्राप्त गर्न आवश्यक प्रयत्न गर्ने(ख)दोस्रो चरणमा पच्चिस करोडभन्दा बढी शोधभर्ना बक्यौता भएका आयोजना-विभाग-मन्त्रालय लगायत निकायसँग आवश्यक छलफल एवं समन्वय गर्ने (ग) तेस्रो चरणमा शोधभर्ना बक्यौता रकम एक करोडभन्दा बढी भएका आयोजना-विभाग-मन्त्रालय लगायतका निकायसँग आवश्यक छलफल एवं समन्वय गर्ने रहेको थियो ।उक्त कार्यदलले चालू आवको पहिलो दुई महिनामा सम्पादन गरेका कार्यहरूमा (क) २०७५ साउन १३ गतेदेखि भाद्र महिनासम्म कार्यविधिअनुरूप पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीन चरण गरी शोधभर्ना लिन बाँकी रहेका प्रत्येक मन्त्रालय र अन्र्तगतका आयोजनाका आर्थिक प्रशासन प्रमुखसहित १५ पटक छुट्टाछुट्टैमन्त्रालयगत वैठक राखी शोधभर्नाको अवस्था, लक्ष्य तथा शीघ्र प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्नुपर्नेकार्ययोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो । एक दुई आयोजनाको डीएलआईमा आधारित शोधभर्ना प्राप्त हुने रकम बाहेक आ.व.२०७४-७५ सम्मको सबै शोधभर्ना लिन बाँकी रकम शोधभर्ना फुकुवा कार्यविधि, २०७५ अनुरूप कार्तिक मसान्तसम्म प्राप्त गर्ने भनी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोजनाका आर्थिक प्रशासन प्रमुखले कार्यदलको बैठकमाप्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । कार्यदलको बैठक पछि सम्बन्धित आयोजनाका आर्थिक प्रशासन प्रमुखले शोधभर्ना खर्च र प्राप्ति रकम मलेनिकाको हिसाबसँग भिडान गरियो । हिसाब भिडान पछिआ–आफ्नो मन्त्रालयमा शोधभर्ना लिन बाँकी पदाधिकारीसँग वैठक बसी शिघ्र शोधभर्ना लिन आवश्यक पहल गरी सोको प्रतिवेदन मलेनिकासमक्ष पेश गर्न महालेखा नियन्त्रक र कार्यदलका संयोजकबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई निर्देशन दिइयो । कार्यदलमा छलफल पछि बैठकमा भएका निर्णय तथा प्रतिवद्धता पत्रबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई पठाई उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी पहल गर्न अनुरोध गरियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुखले आ–आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका आयोजनासँग मन्त्रालयमा बैठक बसी शोधभर्नाका लागि आवश्यक निर्देशन, समन्वय र पहल गरी सम्पादित कामबारे मलेनिकामा नियमित रूपमा प्रतिवेदन गर्नुभयो । साथै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शोधभर्ना छिटो शोधभर्ना आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन हेर्ने महाशाखा प्रमुख, आर्थिक प्रशासन प्रमुख, आयोजनाका प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई शोधभर्नाप्रति सिधै जवाफदेही बनाउन, शोधभर्ना सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्न, आवश्यक ताकेता तथा अनुगमनको लागि आधार बनाउनउहाँहरूको नाम, मोबाइल नम्बर, इमेल आईडी, फ्याक्स नं., आयोजनाको नाम, निकासा विधि, ऋण तथा अनुदान नम्बर, आयोजना लेखा पेश गर्ने समय, आयोजना सुरु तथा सम्पन्न हुने मिति आदि विवरण सकंलन गरी अभिलेख राख्न सुरु गरियो । बजेट कार्यान्वय शाखा प्रमुख तथा कार्यदलका सदस्य, कार्यदलका सदस्य सचिव (लेखा अधिकृत)ले कार्यदलका निर्णय र प्रतिवद्धता अनुसार सम्पादित कामबारे सम्बन्धित मन्त्रालय-आयोजनाका प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासनसँग प्रत्यक्ष तथा टेलिफोनबाट प्रगति लिई कोष व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख तथा कार्यदल संयोजक र महालेखा नियन्त्रकज्यूसमक्ष नियमित प्रतिवेदन तथा आवश्यक निर्णय तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरियो । कार्यदलका संयोजकज्यूले नियमित रूपमा उक्त कार्यलाई अति प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित मन्त्रालय उच्चस्तरीय प्रशासनिक नेतृत्वसँग सक्रिय रूपमा समन्वय गर्नुभयो । कार्यदलले मिति २०७५ असोज २४ गते करिब दुई महिनामा सम्पादित कामको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रकसमक्ष पेश ग-यो ।
तालिका नम्बर १तालिका नम्बर १
आ.व. २०७४।७५ को शोधभर्नाको अवस्था
आ.व.०७४-७५ सम्मको शोधभर्ना लिन बाँकी रकम (प्रारम्भिक) शोधभर्ना प्राप्त रकम शोधभर्ना प्राप्त
रु.४८.३९ अर्व रु.२३.५२ अर्व ४८.६१%
तालिका नम्बर २
पाँच वर्षको प्रथम दुई महिनासम्मको शोधभर्ना प्राप्ति (उपलब्धि)को विवरण
आर्थिक वर्ष ०७१-७२ ०७२-७३
०७३-७४ ०७४-७५ ०७५-७६
शोधभर्ना प्राप्त प्रतिशत १०.१९% ७.३४% ६.९७% १०.६६% ४८.६१%
माथि तालिका नम्बर १ अनुसार आ.व.०७४-७५ को शोधभर्नालिन बाँकी ४८.३९ अर्ब (प्रारम्भिक) मध्ये २३.५२ अर्ब अर्थात ४८.६१ प्रतिशत प्रथम दुई महिनामा शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । अझ अर्थ मन्त्रालयको सहायक सम्झौताबाट स्वायत्त संस्थालाई एकमुष्ट निकासा दिएको मध्ये खर्च नभएको(अनस्पेनट व्यालेन्स)ऋण करिब ८.२८ अर्ब सञ्चित कोषमा दाखिला गरी हिसाब समायोजन गरेमाशोधभर्ना रकम घट्न गई शोधभर्ना प्राप्तिको प्रगति भने ५८.६५% पुग्ने देखिन्छ ।तालिका नम्बर २ मा आ.व.०७१-७२ को सुरुमा शोधभर्ना लिन बाँकी रकममध्ये प्रथम दुई महिना (साउन र भाद्र) मा १०.१९% शोधभर्ना प्राप्त भएको देखिन्छ । यस्तै, आ.व.०७२-७३, आ.व.०७३-७४, आ.व.०७४-७५ मा क्रमशः ७.३४%, ६.९७% र १०.६६% प्राप्त भएको देखिन्छ । तर आ.व.०७५-७६ को सुरुमा शोधभर्ना लिन बाँकी रकममध्ये पहिलो दुई महिनामा ४८.६१% रकम प्राप्त भएको छ । अघिल्लो चार वर्षमा शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम ६.९७ देखि १०.६६ प्रतिशतसम्म रहेकोमा चालू आवको पहिलो दुई महिनामा खर्च नभएको रकम समायोजन बिना पनि करिब ४९ प्रतिशत शोधभर्ना प्राप्त हुनु निकै उत्साहपूर्वक प्रगति हो । उक्त सफलता जति राम्रो छ यसलाई दिगो बनाई शोधभर्नालाई समयवद्ध बनाई राख्न त्यतिनै चुनौती पनि रहेको छ । यसरी शोधभर्ना प्राप्त समयमै हुँदा नेपाल सरकारलाई नगद व्यवस्थापन सहज हुने, आन्तरिक ऋण लिई ब्याज तिर्नु नपर्ने र वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । चालु आवको पहिलो दुई महिनामा शोधभर्ना प्राप्ति उत्साहजनक हुनुमा महालेखा नियन्त्रक, कार्यदलका संयोजक र कार्यदल सवै सदस्यहरूको नतिजामूखी सोच, पूर्व क्रियाशिलता, नजितामूखी कार्य योजना, कार्य योजना अनुसारको ताकेता, शोधभर्ना प्राप्तिलाई दिएको उच्च प्राथमिकता,आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय,आयोजना समन्वय कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको सक्रियता र उच्च महत्वका कारण उक्त उत्साहजनक प्रगति भएको हो ।कार्यदल गठन पछि शोधभर्ना प्राप्तिको उत्साहजनक प्रगतिलाई दिगो बनाउँदै शोधभर्ना लिन बाँकी रकमलाई समयबद्ध रूपमा शून्य बनाउनर बन्द आयोजनाको हालसम्मकै करिव पँचास करोड रकम फरफारक गर्न देहायका पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ र फुकुवा कार्यविधि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने । सम्बन्धित मन्त्रालय-आयोजनाले शोधभर्ना प्राप्त नगरी अर्थ मन्त्रालयमा फुकुवाको लागि अनुरोध गरे पनि शोधभर्ना प्राप्त नहुनुका यथार्थता बुझी वस्तुपरक र मनासिब कारण भए मात्र फुकुवा सिफारिस गरिनुपर्ने । बजेट तर्जुमा प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग घनिभूत छलफल गरेर सम्झौता अनुसार पर्याप्त हुने गरी समपूरक कोषको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने । डीएलआईमा आधारित आयोजनाको सहायता सम्झौता हुँदा वर्षको अन्त्यमा मात्र शोधभर्ना माग गर्ने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने । वार्षिक रूपमा मात्र तेस्रो पक्षबाट डिएलआई सूचकको भेरिफिकेशन गराउने परिपाटीलाई चौमासिक रूपमा गराई शोधभर्ना शिघ्र माग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।वित्तीय व्यवस्था अन्र्तगत सहायक सहायता सम्झौताबाट स्वायत्त संस्था तथा संस्थानलाई शोधभर्ना विधिबाट निकासा दिनुको सट्टा सोझै भुक्तानी विधिबाट निकासा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा वर्षको अन्तमा खर्च हुन नसकेको रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेपछि मात्र शोधभर्ना हुने ऋण वा शेयर लगानी वापतको निकासा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । जसले गर्दा शोधभर्ना बाँकी रकम कम हुन जान्छ ।एकल खाता कोष प्रणालीमा रिम्बर्समेण्ट एप्पलीकेशन थपी अभिलेखन र प्रतिवेदनलाई स्वचालित बनाउनु पर्ने हुन्छ । सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयरको प्रयोग गरी खर्चको तुरुन्त प्रतिवेदन गर्ने गरी सफ्टवेयरविकास गरी उक्त सफ्टवेयरलाई रिम्वर्समण्ट एप्पलीकेशनसँग आवद्ध गर्ने । टीएसए, सिगास र एलएमविआईएस वीच आवद्ध गरी खर्च-निकासा हुने वित्तिकै आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वित्तिय प्रतिवेदन स्वतः सिर्जना हुने गरी प्रतिवेदनको ढाँचा-लेखा फाराम विकास गरी अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु पर्ने ।आयोजनामा काम गर्ने आयोजना प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई शोधभर्ना सम्बन्धी आधारभूत सीप सिकाएर मात्र पदस्थापना गर्नुपर्ने । सीप सिकाउँदा सिकाउँदै सम्बन्धित आयोजनाको ऋण तथा अनुदान सम्झौता बमोजिम नभएको खर्च (इनएजिलेबल एक्सीपेण्डीचर) गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरी शोधभर्ना प्राप्तिप्रति जिम्मेवार बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने ।चालु विकास आयोजनामा कार्यरत आयोजना प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखले सरुवा भई रमानापत्र लिनु अघि आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को अनुसूची ४ र ८ तथा शोधभर्ना फुकुवा कार्यविधि, २०७५ को अनुसूची १ र २ अनुसारको बरबुझारथ गरी सो को अभिलेख राख्ने । सो अभिलेखलाई कासमू, सरुवा, वैदेशिक भ्रमण तथा काजसँग आवद्ध गर्र्न सम्बन्धित मन्त्रालय-निकायले कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने ।सम्बधित मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने । नतिजामूखी अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य योजना तर्जुमा गर्दा सहायता सम्झौता बमोजिम खर्च शीर्षक तथा विधि बारे कर्मचारीलाई जानकारी गराइयो ? सोही अनुसार सही खर्च भयो ? के समयमै आयोजना खाताबाट शोधभर्ना हुने खातामा रकम ट्रान्सफर गरियो ? के समयमै दातृ निकाय समक्ष प्रतिवेदन गरी सबै रकम शोधभर्ना वा कोषपूर्ति प्राप्त गर्न मागपत्र पठाईयो ? के शोधभर्ना माग र प्राप्ति बराबर थियो ? शोधभर्ना प्राप्ति तथा आयोजना प्रतिवेदनमा दातृ निकायको के कस्तो प्रतिक्रिया थियो ? के समन्वय कार्यालयले शोधभर्ना खर्च, माग, प्राप्ति, शोधभर्ना प्राप्त बाँकी रकमको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक चौमासिकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भिडाई शोधभर्ना कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ? आयोजना बन्द भई शोधभर्ना लिन नसकिएको रकम कहिले र कसको पालामा खर्च भएको हो ? प्राप्त हुन नसक्नुका काराणको स्पष्ट अभिलेख छ ? आयोजना सम्पन्न पछि शोधभर्ना हिसाब मिलान गर्ने अवधिमा के कस्ता प्रयास भएका छन्? आदि क्रियाकलाप समावेश गर्ने । कार्ययोजना अनुसार निरन्तर अनुगमन गर्ने । अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल सुधार र मूल्यांकनबाट प्राप्त सिकाइलाई आगामी नीति तथा त्यस्तै आयोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने । बन्द आयोजनामा शोधभर्ना लिन बाँकी रकम दातृ निकायबाट शोधभर्ना प्राप्त नहुने, शोधभर्नाको लागि प्रमाण जुटाउन सकिने भएसोसमेत र प्रमाण जुटाउन नसकिने भएसम्बन्धित मन्त्रालयले औचित्यसहित निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा खर्च समर्थनको लागि अनुरोध गर्ने । लेखाउत्तरदायी अधिकृतले अर्थ मन्त्रालयसँग उचित समन्वय गरी बन्द आयोजनाको शोधभर्ना फरफारक गराउने जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकतादिनुपर्ने । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पछि मलेनिकाले शोधभर्ना हिसाव फरफारक गर्नुपर्ने । बढी शोधभर्ना प्राप्त देखिएको ऋण तथा अनुदान रकम मलेनिकाको प्रत्येक वर्ष शोधभर्ना हुने ऋण तथा अनुदान खाताबाट सञ्चित कोषमा दाखिला भैरहेको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मलेनिकाले हिसाब फरफारक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।(लेखक उप–महालेखा नियन्त्रक हुन् ।)
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 7:49:00 AM No comments:
देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र राज्यसत्ताका विविध अंगहरू धार्मिक उत्सवहरूमा हार्दिकतापूर्वक सरकारीस्तरमा भाग लिन थालेपछि संविधानमा घोषित धर्मनिरपेक्षता खोक्रो हुनजान्छ ।
संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था एउटा औपचारिकता मात्र देखिन्छ र यसमा थप विकासको आवश्यकता छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा भनेको छ – “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ । तर, ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृति’ के हो भन्ने कतै लेखिएको छैन । प्रवृत्तिको आधारमा भन्नुपर्दा यसको आशय राज्यले पारम्परिक रूपमा अभ्यास गर्दै आएको धार्मिक–सांस्कृतिक अभ्यासको निरन्तरता हो भन्ने बुझ्नु उचित देखिन्छ ।
००७ सालदेखि ०६२ सम्मको राजनीतिक आन्दोलनहरूमा धर्मनिरपेक्षता कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक मागका लागि उपस्थित रहेको देखिन्छ । यसको उद्देश्य राज्यसत्ता वा कानुनको नजरमा कुनै एकल धर्मको श्रेष्ठता नहुनु र सबैसित समान व्यवहार हुनु हो । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय चरित्रको नेपालजस्तो देशमा कुनै एकल धर्मको श्रेष्ठता वा वर्चस्व न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । राज्यसत्ताका निम्ति सबै समुदाय समान हुन्छन्, राज्यको धर्म हुँंदैन, जनताप्रति समर्पित कर्तव्य मात्र हुन्छ भन्ने विकसित भाव नै धर्मनिरपेक्षता हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यसत्ताले धर्मलाई व्यक्तिको निजी आस्था र विचारको विषय मान्दछ र धर्म मान्ने वा नमान्ने अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्दैन ।
बिपी कोइरालाले लोकतान्त्रिक राज्यका निम्ति धर्मनिरपेक्षतालाई अनिवार्य तत्व भनेका थिए । गान्धीले लेखेका छन् – ‘मेरा निम्ति व्यक्तिगत रूपमा धर्मबाट अलग रहने स्थितिको कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ, तर जहाँंसम्म राज्यको प्रश्न छ, धर्म र राजनीति दुई फरक विषयहरू हुन्, एक–अर्कामा मिसाएपछि अन्योल र अलग राख्दा जीवन सरल र सुन्दर हुन्छ ।’
वर्तमान गणतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा जनताको गणतन्त्र बनाउने अधिकांश कार्यभार बाँंकी रहे पनि प्राप्त उपलब्धिमध्ये धर्मनिरपेक्षता पनि एउटा हो । विविध धर्मबीचको द्वन्द्व र राज्यमाथि वर्चस्वको विरोधमा युरोपमा विकसित आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतान्त्रिक देशहरूले लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्वको रूपमा स्वीकार गरे । विश्वमा धर्मनिरपेक्षताका प्रायः चारवटा अभ्यास देखिएका छन् । पहिलो, अमेरिकी शैलीको धार्मिक स्वतन्त्रताको धर्मनिरपेक्षता, जहाँं संविधानले राज्यमाथि धर्म थोपर्ने, प्रोत्साहित गर्ने र धार्मिक विश्वासको आधारमा राज्यमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई दुरुत्साहित गर्दछ । यद्यपि, अनधिकृतरूपमा अमेरिकामा संकीर्ण गोरा क्रिस्चियनिटी हावी देखिन्छ र डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतित्वकालमा काला अमेरिकीप्रति झन् बढी असहिष्णु र आक्रामक हुँंदै गएको देखिन्छ । दोस्रो हो, फ्रान्सेली शैलीको सामाजिक नियन्त्रणको सिद्धान्त, जसले संवैधानिक रूपमा धर्म मान्नु वा नमान्नुलाई वैयक्तिक मान्दछ र धर्मलाई संगठित रूपमा समाजमाथि नियन्त्रण गर्ने वा प्रभावित गर्ने अधिकार दिँंदैन ।
यसले धार्मिक प्रतिकहरूको प्रदर्शनलाई निषेध गर्दछ र आवश्यकतानुसार धार्मिक संगठनमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार राज्यलाई दिन्छ । केही वर्षपहिले इस्लामिक चरमपन्थीहरूले फ्रान्सको स्वतन्त्र र अनिश्वरवादी मिडियाहरूमाथि गरेको हमलालाई लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिमाथिको हमला मान्दै फ्रान्सेली सरकारले सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर मुस्लिम महिलाहरूले लगाउने बुर्काको प्रयोग निषेध गरेको प्रसंग सान्दर्भिक छ । तेस्रो, भारतीय संविधानले अपनाएको धार्मिक स्वायत्तताको सिद्धान्त हो । यो धार्मिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तजस्तै छ । फरक कति छ भने यस अवधारणामा राज्य स्वयंले जनतालाई आधिकारिक रूपमा धार्मिक समूहमा विभाजित गर्दछ, विभिन्न धार्मिक व्यक्तिगत कानुन (पर्सनल ल’ बिल वा कोड) निर्माण गर्दछ । यस अवधारणाले विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनी शक्ति प्रदान गर्दछ ।
चौथो, हाल इतिहास भइसकेको सोभियत संघ र साम्यवादी विचारधाराका देशहरूले अँंगालेको अनिश्वरवादी राज्यहरूमा धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त हो । यस अवधारणाले धर्मलाई स्वतन्त्र र विवेकशील पूर्णमानवको विकासमा अवरोध मान्दछ र समाजलाई कुनै पनि धर्मबाट प्रभावित हुने वैचारिक र सामाजिक स्रोतहरूलाई विकसित हुने छुट दिँंदैन । यसले धर्मलाई वैयक्तिक आस्थाको विषय स्विकार गर्दछ, तर धर्मको संगठित रूपलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्दछ ।
अमेरिका, टर्की, भारतजस्ता लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष भनिने देशहरूले आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक वर्चस्वको अनुकूलतामा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
अरेबियाली देशहरूमा धर्मनिरपेक्षताको तुलनामा इस्लामी धार्मिक तानाशाही झन् बलियो हुँंदै गएको देखिन्छ ।
नेपाली समाज मुख्यतः हिन्दू, बौद्ध, किराँत, मुसलमान, जैन आदि मिश्रित बहुधार्मिक समाज हो । केही चतुर हिन्दू अगुवाहरूले ओमकार परिवारका रूपमा बौद्ध र किराँतलाई समेत हिन्दू धर्मअन्तर्गत तान्ने कोसिस गरे पनि दार्शनिक र पारम्परिक रीतिथितिका रूपमा बौद्ध र किराँत हिन्दूभन्दा भिन्न धार्मिक समुदायहरू हुन् । महायानी बौद्धहरूको अवतारवाद वैष्णवी पौराणिकतानजिक भए पनि उनीहरूले पनि स्वतन्त्र अस्तित्वको दावी गर्दै आएका छन् ।
आदिवासी जनजातिहरूमा प्रचलित हिनयानी बौद्धमत प्रकृतिधर्मी बोन्बो र किराँत मन्धुमसँग हार्दिक देखिन्छ । समग्रमा बौद्धधर्म दार्शनिक रूपमा अनिश्वरवादी दर्शनको नजिक छ भने हिन्दू ईश्वरवादी आध्यात्मिक मान्यतामा आधारित छ । त्यस्तै, जैनको व्यावहारिक पक्ष धार्मिक देखिए पनि दार्शनिकस्तरमा यो पनि अनिश्वरवादी धारणा नै हो । इस्लाम र क्रिस्चियन भिन्नै परम्पराका धर्महरू हुन् । यस्तै, समुदायगत आधारमा हिन्दू नै भए पनि पहाड र तराईका जनसमुदायहरू विशिष्ट परम्परा र चलनहरूमा विकसित फरक राजनीतिक सांस्कृतिक समुदायहरू हुन् ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 7:48:00 AM No comments:
वस्तुु उत्पादनमा ‘वात्साह’को दर्जा पाएको चीन आफ्नो मुुद्रा कमजोर बनाउन चाहन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको पनि छ । सर्सर्ती हेर्दा ठूूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पुु-याउने रणनीति लिने चीन जस्ता देशको मुुद्रा (युुआन) कमजोर भयो भने रणनीति सफल बनाउन सजिलो हुुन्छ । कुुनै पनि निर्यात वृद्धिका सम्भावना भएका देशहरूमा मुुद्राको मूल्य घटेर बेफाइदा हुुँदैन । तर नेपालजस्ता आयातमुुखी देशहरूको सम्बन्धमा कम मूूल्यमा निर्यातयोग्य वस्तुु उत्पादन हुुने अवस्था नहुुने हुुँदा र आयात र ऋणमा अर्थतन्त्रको ठूूलो हिस्सा निर्भर हुुने भएकाले मूूद्राको मूूल्य घट्नुु राम्रो हुुँदैन/मानिँदैन।
डलर–मूूूल्य घटबढ हुँदाका असर
१) स्वदेशको मुद्राको मूूल्य घट्छ । फलतः नुनदेखि सुुनसम्मका वस्तुु आयात गर्नुुपर्ने नेपाल जस्ता देशलाई डलरको मूूल्य बढ्नेबित्तिकै आयात महँगो पर्न जान्छ।
२) ऋणको साँवा र ब्याज बढ्छ । नेपालजस्ता ठूूलो मात्रामा विदेशी ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण तिर्न महँगो पर्छ।
३) विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना हुन्छ । डलरको मूूल्य बढेपछि डलरमा आउने लगानीको महत्व बढी हुुन्छ।
४) विप्रेषणबाट हुुने आम्दानी बढ्छ । विदेशमा कमाएर डलरको मूल्यमा नेपालमा भित्रिने रकममा वृद्धि हुुन्छ।
५) निर्यात बढ्छ । नेपाली मुुद्राको मूूल्य घटेर डलरको मूूल्य वृद्धि हुुँदा निर्यातबाट फाइदा पुुग्छ।
६) स्वदेशमा उत्पादन गरेर कमाउनुुभन्दा विदेशतिरै गएर कमाउन सजिलो हुुनेतिर दृष्टि पुुग्न थाल्छ।
७) नाफा घट्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लैजाने नेपाली मूूल्यको नाफा घट्छ।
समग्रमा डलरको मूल्य बढ्दा वा नेपाली मुुद्राको मूूल्य घट्दा सबै बेफाइदा वा सबै फाइदा हुुने होइन । घटबढ भएको अवस्थामा लिनुुपर्ने उचित कदमबाट मात्र घटबढबाट हुुने फाइदा बेफाइदाको आँकलन गर्न सकिने हुन्छ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 6:50:00 AM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 6:29:00 AM No comments:
अख्तियार र अनुचित कार्य-रामकुमार आचार्य
संविधानले अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अख्तियारको अधिकारलाई हटाइसकेपछि यस्तो कार्य हेर्ने कुनै निकाय छैन। प्रधानमन्त्रीमातहत रहने गरी त्यस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्ने कानुन अविलम्ब बनाइनुपर्छ।
अनुचित कार्य भनेको के हो? के संविधानले अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अख्तियारको अधिकारलाई हटाएको छ? अनुचित कार्य हेर्ने व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्छ वा ऐनले पनि गर्न सक्छ? यतिखेर अनुचित कार्य हेर्ने कुनै निकाय छैन? के अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाउनु मुनासिव हुन्छ?
नेपाल कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोगभित्र अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार पर्छन्। भ्रष्टाचारमा मूलतः लिनु/खानु गरी आर्थिक हानिनोक्सानी भएको हुन्छ। उता अनुचित कार्यमा लिनु/खानु भएको हुन पनि सक्छ या नहुन पनि सक्छ। भ्रष्टाचार भएको भए पनि प्रमाणित गर्न सकिँदैन। यसअन्तर्गत अधिकार क्षेत्र नाघेको, पालना गर्नु पनि विधिविधान पालना नगरेको, स्वेच्छाचारी भएको, कर्तव्य पालना नगरेको जस्ता भ्रष्टाचारबाहेकका अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी कामकारबाही पर्छन्।
अनुचित कार्य हेर्ने निकाय शून्यताको अवस्था छैन। संघीय कानुनबमोजिम अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अख्तियार नै हो। प्रमुख आयुक्तले भने झैं कुनै ‘अलमलमा’ पर्नुपर्ने अवस्था होइन। अख्तियारले संविधानमै बलियो प्रबन्ध होस् भन्ने चाहना राख्नु बेग्लै कुरा हो। तर विगतका असफलतालाई विश्लेषण गरेर भइरहेकै कानुनको अधिकतम् सदुपयोग गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
अन्तिम प्रश्न पेचिलो छ। के अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाउनु आवश्यक छ? अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? अनुचित कार्य हेर्न प्रधानमन्त्रीमातहतको निकाय हुँदा के हुन्छ?
भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अन्तरसम्बन्धबारे अख्तियार आफैं वार्षिक प्रतिवेदनमा भन्छ ‘वास्तवमा भ्रष्टाचारको प्रारम्भ नै अनुचित कार्य भएकाले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्या मिश्रित छन्। भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिन सक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन।’ यस्तो सही विश्लेषणविपरीत नयाँ मस्यौदामा आफ्नो अधिकार कटौती गर्नु कान नछामी कागको पछि दौडिनुसरह हो।
अख्तियारजस्तो स्वायत्त संवैधानिक निकायको विकल्पमा अनुचित कार्य हेर्न कार्यकारिणीअन्तर्गत अर्को निकायको परिकल्पना गरिनु सुशासन पक्षमा झन् खतरनाक हुनेछ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 6:10:00 PM No comments:
नेपाल बदल्ने दश कुराः फजुल खर्च रोक्नेदेखि एकवर्षे जागिरसम्म-कृष्णहरि बास्कोटा
भ्रष्ट्राचारको मूलजरो रक्सी हो । समाजमा देखिएको विकृति-विसंगति, फजुल खर्च सबैको जड पनि रक्सी नै हो । रक्सी नै उपहार दिएका छन्, लिएका छन् ।
यो बर्ष छोरी सुम्पेको ज्वाँईलाई अर्को बर्ष जेठानले रक्सी पिलाउन थाल्छ । राजनैतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीहरु ठर्राबाट पिउन शुरु गरेर पद र जिम्मेवारी बढेसँगै रक्सीको गुणस्तर र मूल्य बढाउँदै जान्छन्, ती रेडलेवल, व्ल्याक लेबल र व्ल्यू लेवल हुदै रक्सीका सबै आर्जन लगानी गर्न ईच्छुक हुन्छन् । नेपालमा ७५३ ओटा स्थानीय तह छन्, जस्ले मदिरा नियन्त्रणको पहल आरम्भ गर्छ, उसलाई तत्कालै केन्द्रीय सरकारबाट रु १ करोड दिने घोषणा गर्नुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउने नागरिकको हक हो भनेको छ । हाल नेपालमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा निःशुल्क छ । अपरेशन थियटर र चिकित्सकको सेवा निःशुल्क प्राप्त हुन्छ । आकस्मिक सेवा पनि निःशुल्क छ ।
सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरेको छ । कडा रोगमा सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, निश्चित आर्थिक सहायता र विभिन्न स्कीम दिएको छ । उदाहरणका लागि मृगौला रोगीले जीवनभर निःशुल्क डाईलासिस सेवा पाउँछन् ।
पन्ध्र बर्ष मुनीका र ७५ बर्ष माथिका मुटु रोगीको निःशुल्क उपचार हुन्छ । महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याको शल्यक्रिया निःशुल्क हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा अगाडि बढाएको छ । यी सबैलाई एक ठाउँमा प्याकेजिङ्ग गरी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरी यस्मा भैरहेको व्यापार पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ ।
संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भनिएको छ । माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसर्थ सबै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य निकाय र शिक्षा क्षेत्रका स्कूल र कलेजलाई क्षतिपूर्ति दिएर सरकारी नियन्त्रणमा लिनु पर्छ वा ट्रष्टमा रुपान्तरित गर्ने लगायतका विभिन्न विकल्पमा जान सकिन्छ । जरोकुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार निषेध गर्ने नै हो ।
नेपालमा युवाहरुलाई राज्य प्रणाली बारे जानकारी दिने कुनै बिधि र प्रकि्रया छैन । साविकका एमएमका बिद्यार्थीलाई ‘राबिसे’ को नाममा जिल्ला जिल्लामा खटाईन्थ्यो । हाल यो क्रम भंग भएको छ ।
कैयौं देशमा युवाहरुलाई एक वा दूई वर्षे, एक प्रकारको सैनिक तालिम दिईन्छ । नेपालमा यस प्रकारको कि्रयाकलाप पनि गरिदैन । यसर्थ बिए र एमए पास गर्नुपूर्ब अनिबार्यरुपमा एकबर्ष सरकारी जागिर दिनु पर्छ । यसबाट हरेक युवाले राज्य प्रणाली बुझ्ने अबसर पाउनेछन् । उनीहरु आफ्नो अध्ययन पूरा भएपछि उपयुक्त पेशामा लाग्न स्वतन्त्र हुनेछन् । यसबाट यूवामा एक्सपोजर बढ्ने छ ।
यसबाट बहुआयामिक फाईदा पुग्नेछ । सरकारी जागिर भन्नाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्बजनिक संस्थान, आयोग, समिति, सेना, प्रहरी, सरकारी स्कूलको शिक्षक लगायतलाई जनाउनेछ ।
नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानका लागि पनि कम्तिमा हामी ५ कुरामा आत्म निर्भर हुनै पर्छ । यस्मा पहिलो खाद्यान्न हो । नेपालमा ३५ लाख हेक्टर जमिन कृषि उत्पादन योग्य छ ।
हाल बर्षेनी करिब एक करोड मेटि्रक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । एक हेक्टरमा ३.५ मे. ट. को औषत उत्पादनलाई सजिलै ७/८ टनको उत्पादनमा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसबाट नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेछ । दोस्रो, हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । नेपालमा भित्रिएको टनेल खेती र बेमौसमी तरकारी उत्पादनका कारण यो संभव छ । तेस्रो, फलफूलमा हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ ।
हाल नेपालीले खपत गर्ने फलफूलको ८० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । यसैगरी चौथो, दुग्ध पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । मिल्क होलीडेलाई व्यवस्थित गर्ने वित्तिकै यो संभव छ ।
पाँचौ, मासुजन्य वस्तुमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । यस्मा करिब ७५ प्रतिशत खपत आयातमा भर परेका छौँ । तर पोल्ट्रीमा भने कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । यी ५ कुरामा आत्मनिर्भर हुने वित्तिकै नेपालको मान, प्रतिष्ठा र सान उच्चो हुन्छ । आत्मबल बढ्छ ।
फजूल खर्च रोक्ने भनेको सरकारी भोजभतेर बन्द गर्ने र सरकारी विदेश भ्रमण रोक्ने भन्ने मात्रै बुझएिको छ । कुनै पनि नागरिकले न्वारान गर्दा, विवाह, ब्रतबन्धको समारोह आयोजना गर्दा आफ्ना थरका गुठियार र नाता सम्बन्धका पाहुना बाहेकलाई आमन्त्रण गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला नेता, प्रशासक वा व्यापारीले विवाहमा काठमाडौंमा काठमाडौं भरीका मानिस बोलाउने गरेका छन् । यही कुरा विराटनगर, वीरगंज, पोखरा, बुटवल, नेपालगंज/सुर्खेत र महेन्द्रनगर हुँदै नेपालभरी फैलिएको छ । समाज नै फजूल खर्ची हुन्जेल मुलुकको समृद्धि संभव छैन ।
नागरिकले परिश्रम गर्न, आफ्नै खुट्टामा उभ्भिन, बचत गर्न, लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन अग्रसरता देखाउनु पर्छ । ऋण काढेर, घुस खाएर, पाकेट मारेर, लुटेर भोज भतेरमा ‘सान’ देखाउन मिल्दैन । यसलाई अभियान कै रुपमा पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ ।
६. ७५३ कोशेली घर खोल्ने
प्रत्येक स्थानीय सरकारले कम्तिमा एउटा कोशेली घर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यस्मा आम नगरवासी वा गाउँवासीले आफ्नो घरमा वा बारीमा जे उत्पादन हुन्छ, सो वस्तु कोशेली घरमा बिक्रीमा राख्न पाउने प्रबन्ध हुनुपर्छ । घरेलु उद्योगका रुपमा उत्पादन हुने अचार, पापड, चाउचाउ, डालो, चामल, तरकारी, कुखुरा, खसी, दुध, मह लगायत कोशेली घरमा लगेर छोड्ने र त्यहाँको व्यवस्थापनले अभिलेख राखी सो वस्तु बिक्री गरेर नागरिकलाई नगद वा आवश्यक परेको वस्तु उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
त्यसै मुलुक समृद्ध हुने भए किन संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चाहिन्थ्यो ? तिनले के गर्दा मुलुक ठीक दिशामा हिड्छ, त्यस अनुसार आफ्ना सोच लागू गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक युवा आफ्नो खुट्टामा उभ्भिनु पर्छ । बाबु बराजुको सम्पत्तीले समृद्धि हुने होईन । युवालाई आफ्नै कमाईको गर्व गर्न सिकाउनु पर्छ । यस्का लागि १८ बर्षको उमेर पछि प्रत्येक घरका युवाहरु घरबाट बाहिर निस्किएर आफैले कमाएर बाँच्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि पैत्रिक सम्पत्ती स्वतः छोरा छोरीमा अपुतालीका रुपमा जाने प्रणालीलाई कानूनद्वारा निषेध गर्नुपर्छ । आमा-बाबुको सम्पत्ती ट्रष्ट वा पालिकामा जाने भएपछि स्वतः ‘राम्रै आकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ प्रदान गर्न सकिनेछ । यसबाट जेष्ठ नागरिकको ठूलो ‘कल्याण’ हुनेछ भने प्रत्येक युवा आफ्नै खुट्टामा उभिई स्वतन्त्र र स्वाभिमानी भै केही गर्न सक्ने हुनेछ, बाबुआमाको परनिर्भरताबाट मुक्त हुनेछन् ।
घुसै खानेले पनि आफूलाई बाचुन्जेललाई आबश्यक पर्ने मात्र घुस खानेछ, सातपूस्तालाई पुग्ने घुस खाने छैन । साथै घुस खाने जेल पर्ने, तर निजले खाएको घुस छोरा छोरीले मौजले खाने अबस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
प्रत्येक घरका आमा-बुवाले आफ्नो सन्तालाई कम्तिमा १८/२० बर्षसम्म पाल्ने हुर्काउने र कमाईको लागि योग्य बनाउँछन् । त्यसपछि छोराछोरीले कमाउन थाले पछि बाबु-आमालाई बिर्सिन्छन् ।
यो सरासर ‘सामाजिक अन्याय’ हो । यसर्थ तत्कालै कानून बनाएर आार्थिक सहयोगको आवश्यकता महशुस गर्ने प्रत्येक आमा-बाबुलाई छोराछोरीको मासिक आम्दानीको १० देखि २५ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना तलब सरी दिनुपर्नेे कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालमा हाल जमिनको लालपूर्जा व्यक्तिको नाममा वितरण गर्ने गरिएको छ । यसलाई निषेध गर्नुपर्छ । मुलुकभित्रको सबै जमिनको लालपूर्जा सरकारको नाममा हुनुपर्छ । कुनै नागरिकले भवन/घर निर्माण गर्न चाहेमा एउटा घडेरी लिजमा दिनु पर्छ ।
यसबाट एक नेपालीको एक घडेरी र एक घर हुनेछ । यसैगरी उद्योग स्थापना गर्नेले औद्योगिक क्षेत्रको जमिन पाउनेछन् भने व्यापार गर्नेले व्यापारिक क्षेत्रको भूमि पाउने छन् । कृषकले कृषि भूमि लिजमा पाउने छ भने सार्वजनिक हितमा काम गर्नेले सार्वजनिक वा वन भूमि लिजमा पाउनेछ ।
तोकिएको काम नगरेको भोलिपल्टै जमिने खोसिनेछ । यसबाट जमिन बाँझो रहने संभावना पूर्णरुपमा रोकिनेछ । मुलुकको समृद्धिका लागि यो निर्णय अपरिहार्य छ ।
नेपालमा सबै ७७ जिल्लामा वन छ । तर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यस्को योगदान केबल ६ प्रतिशत मात्रै छ । यसर्थ प्रत्येक वनमा एउटा फलफूल खेती गर्नुपर्छ । यस्कालागि सबै वन क्षेत्र स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी त्यस्को लाभ पनि उनीहरुलाई नै दिनुपर्छ । यसबाट नेपालमा सुन्तलाघारी, केरा वन, नासपाती क्षेत्र, किम्बू प्रदेश, अनार क्षेत्र, स्याउ वन, ऐसेलु घारीको विकास भै फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने मात्रै होईन, निकासी समेत हुनेछ । साथै बहुमूल्य जूस तयार भै निकासी गर्न सकिनेछ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 8:09:00 PM No comments:
अर्थतन्त्रको कखराः आर्थिक वृद्धिदेखि बन्द अर्थतन्त्रसम्म -सन्तोष आचार्य
आर्थिक वृद्धिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई पक्षलाई समेट्छ । आर्थिक वृद्धि हुँदा देशमा उत्पादन बढेको, रोजगारीका अवसरहरु फराकिलो हुँदै गएको, व्यक्तिको क्रयशक्ति वढेको जस्ता विषयहरु प्रत्यक्षतर्फ रहन्छन् । अप्रत्यक्षको पाटोमा चाहिँ देशभित्र आर्थिक रुपमा नै सक्रिय व्यक्ति, व्यावसायिक समूह/वर्ग (स्वदेशी,विदेशी) मा भविश्यप्रति सकारात्मक अपेक्षाको सञ्चार हुन्छ । यसको कारण अर्थतन्त्र पुनः चक्रीय आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दछ ।
देशले जति धेरै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो, त्यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै पक्षलाई वृहत बनाउँछ । परिणामस्वरुप बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने, स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग हुने, निर्यात गर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि हुने, वैदेशिक मुद्राको आर्जन बढ्न सक्ने, सोधान्तर अवस्था सकारात्मक हुने जस्ता सूचकहरु देखिन्छन् । यसर्थ कुनै पनि अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि सधैँ अपेक्षित रहन्छ ।
आर्थिक वृद्धिको यत्ति धेरै सकारात्मक आयाम हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि देशले चाहेजस्तो वृद्धि प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन । एक/दुई वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा प्रभाव नपार्न पनि सक्छ ।
अर्थतन्त्र के हो ?
विश्व अर्थव्यवस्थामा ‘अमेरिकी अर्थतन्त्र’ को प्रभाव जबरजस्त रहेको छ । युरोपेली युनियनबाट बाहिरिएपछि ‘बेलायती अर्थतन्त्र’ मा धेरै दरार देखिएको छ । चीनको ‘अर्थतन्त्र’ अबको केही समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । ‘भारतको अर्थतन्त्र’ दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ ।
अर्थतन्त्रलाई परिभाषित गर्न ४ वटा आर्थिक इकाइलाई लिने गरिन्छ । पहिलो- घरपरिवार, दोस्रो- व्यावसायिक क्षेत्र, तेस्रो-सरकार र चौथो-अन्तरराष्ट्रिय बजार । घरपरिवारले तयारी वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्दछ । अनि श्रम पुँजी र आफ्नो सम्पति वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रयोग गर्न प्रवाह गर्दछ । व्यावसायिक क्षेत्रले कच्चा पदार्थ, श्रमको प्रयोग गरि उपभोगजन्य वस्तु तथा सोवाको उत्पादन गर्दछ । सरकारकारले घरपरिवार, व्यावसायीक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछ ।देशमा अभाव हुँदा अपुग वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न र देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको पूर्ति धेरै हुँदा निर्यात गर्न अन्तरराष्ट्रिय बजारको जरुरी हुन्छ । अर्थतन्त्र त्यतिखेर निर्माण हुन्छ जुन बेलामा यी चार इकाइहरु एक-अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्न थाल्दछन् । यसर्थ अर्थतन्त्र भनेको यिनै इकाइहरुको अन्तरक्रिया हो ।
बन्द अर्थतन्त्र आर्थिक इकाइका तीनओटा इकाइबीचको अन्तरक्रिया हो । बन्द अर्थतन्त्रमा घर परिवारले आफूसँग रहने श्रम, पुँजी, व्यवसायिक क्षेत्रलाई दिन्छ । जसको उपयोग गरी उक्त क्षेत्रले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दछ ।
यसैगरी सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रको बीचमा पनि अन्तर्क्रिया हुन्छ । सरकारले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपयोगको अनुमति दिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी सरकारलाई पूर्ति गरेको हुन्छ ।
जस्तो-कम्प्युटर व्यावसायिक क्षेत्रको उत्पादन हो सरकारले उपयोग गर्छ । सरकारले जलविद्युत निर्माण गर्न व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्रोतको उपयोग गर्ने अनुमति दिन्छ । उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोग गरी घर परिवार र व्यवसायिक क्षेत्रबीच अन्तर्क्रिया भइरहन्छ । त्यसैगरी घर परिवारले सरकारलाई पनि श्रम उपलब्ध गराउँछ, पुँजी प्रदान गर्दछ । जस्तो-सरकारका कर्मचारी घरपरिवारबाट प्राप्त स्रोत हो । सरकारले घर परिवारलाई सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी वितरण गर्दछ । यसरी सरकार र घर परिवारको बीचमा अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।
यसरी तीनवटा क्षेत्रमा मात्र अन्तरक्रिया हुँदा निर्माण हुने अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र हो । बन्द अर्थतन्त्रमा आयात, निर्यात शून्य हुन्छ । यस अर्थतन्त्रले विश्वबजारसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध राख्दैन ।
अहिले हामीले उदाहरण दिँदा उत्तर कोरियाली अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र भन्छौं, तर त्यो होइन । एउटा प्रतिवेदनअनुसार उत्तर कोरियाको सन् २०१५ को कुल निर्यात २.८३ विलियन डलर रहेको देखिन्छ , जसमध्ये ८३ प्रतिशत चीन, ३.५ प्रतिशत भारत, १.५ प्रतिशत पाकिस्तान र १२ प्रतिशत अन्य मुलुकमा निर्यात रहेको पाइन्छ । यसको मतलब हाल विश्वमा कुनै पनि अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र रहेका छैनन् ।
खुला अर्थतन्त्र भनेको बन्द रहेको अर्थतन्त्रले अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग अन्तरक्रिया गर्नु हो । खुला अर्थतन्त्रमा घर परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, व्यवसायिक क्षेत्रले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजार र सरकारले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग माग र आपूर्तिको सम्बन्ध राखिराखेको हुन्छ । जस्तै-घर परिवारबाट श्रमिकको रुपमा कामदार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जान्छन्, घर परिवारले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्राप्त वस्तु उपयोग गर्छ ।
जस्तै-मैले बेइजिङ जाँदा ओप्पो मोवाइल किनेर उपयोग गरिराखेको छु । व्यावसायिक क्षेत्रले आफ्ना लागि आवश्यक बस्तु तथा सेवा आयात गर्दछ । जस्तो- सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्कर आयात गरी प्रयोग गर्छ । त्यसैगरी व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन्छ । जस्तै-नेपालमा उत्पादित अलैैंची विश्व बजारमा लगेर बेचिन्छ । त्यसैगरी सरकारले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दछ भने सरकार नियन्त्रित उत्पादित वस्तुहरु विभिन्न मुलुकमा लगेर बेचिन्छ । यसरी अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग अन्तरक्रिया हुन्छ ।
यसरी चारवटा इकाइको बीचमा अन्तर्क्रिया हुँदा केही सूचकहरु देखिन्छन् । जस्तो- घर परिवार, व्यवसायिक क्षेत्र र सरकारका बीचमा अन्तर्क्रिया हुँदा रोजगारीका कुराहरु आउँछ, घर परिवारको बचतको कुरा आउँछ । बस्तु तथा सेवाको मूल्यको कुरा, व्यवसायिक क्षेत्रको लगानीको कुरा, सरकारले गर्नुपर्ने खर्चको कुरा, राजस्वको कुरा, यिनै अन्तरक्रियाले सिर्जना गर्छ ।
आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित हुन्छ ?
त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग अन्तर्क्रिया हुँदा विनिमय दर, आयात निर्यात, वैदेशिक लगानीजस्ता विषय आउँछ । यसर्थ चार इकाइको अन्तर्क्रिया अर्थतन्त्र हो । सोही अन्तर्क्रियाबाट निस्कने सूचकहरु -उत्पादन, रोजगारी, मूल्य अभिवृद्धि, लगानी, सरकारको आयव्यय, विनिमय दर, आयात निर्यात वैदेशिक लगानी आदि) लाई आर्थिक सूचकांक भनिन्छ । आजभोलि यिनै सूचकांकका आधारमा अर्थतन्त्रलाई बुझिन्छ । वास्तवमा सूचकांकले अर्थतन्त्रलाई चिनाउँछ । तर, परिभाषित गर्दैन ।
विश्वको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित छैन । किनभने अर्थतन्त्रका ४ एकाइका आ-आफ्नै छुट्टाछुट्टै विशेषता रहेका छन् । घरपरिवारको क्रय क्षमता वा स्वाद र चाहनामा आउने अचानक परिवर्तन, व्यावसायिक क्षेत्रले हिँड्न खोजेको बाटो अनि सरकारले देखाएको बाटो फरक हुने आयात-निर्यात गरिने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तत् तत् देशको आन्तरिक कारणले पनि एउटा देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । यसर्थ कुनै पनि देशले चाहेकेा गतिमा प्रायः मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित रहँदैन ।
नेपालको विगत दश वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै पनि अपेक्षित रहेन । विगतमा आर्थिक वृद्धिदर पूर्वानुमान गर्दा २ वटा सीमा पनि उल्लेख गरिन्थ्यो । पहिलो- उपयुक्त वर्षा हुने र दोस्रो- राजनीतिक स्थिरता रहेमा भन्ने शर्त । यसले के संकेत गरेको छ भने नेपालमा माथि उल्लेखित आर्थिक इकाइको बीचमा हुने अन्तरक्रिया एकदम कमजोर, सानो छ । हुन पनि नेपालको कुल आर्थिक क्रियाकलापको मूल्य रु. ३० खर्बको मात्रै रहेको छ ।
नेपालको घरपरिवारले उपभोग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । यसकारणले गरीब छ । रोजगारीको सिर्जना गर्न व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि उसले बजार हेर्छ, जुन उपयुक्त छैन । कारण, बेरोजगारी समस्या छ ।
बजारमा उपलब्ध श्रम शक्तिको १० प्रतिशत पनि व्यवसायिक क्षेत्रले खपत गर्न सकेको छैन । यसको मतलव देशमा निजी व्यावसायिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।
घरपरिवारको, निजी/व्यावसायिक क्षेत्रको न्यून आर्थिक भूमिकाको कारण राज्यले अपेक्षित कर संकलन गर्न सक्दैन । परिणामतः अर्थतन्त्र खासै बढ्दैन । बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, कमजोर स्वदेशी मुद्रा, न्यून विदेशी मुद्रा, सञ्चितिजस्ता विषयहरु दोहोरिरहन्छन् ।
आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ ?
सरकारले लगानीमार्फत् अर्थतन्त्रलार्इ चलायनमान बनाउन सक्छ । सरकारले लगानीलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ, जुन पूर्वाधारलगायत पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ । जसै पूर्वाधारमा सरकारले खर्च गर्छ, व्यावसायिक क्षेत्र बालुवा, सिमेन्ट, डण्डी आदिको उत्पादन गरी पूर्ति गर्छन् । यसको परिणाम सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको अन्तक्रिर्याको आकारमा वृद्धि हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्र विस्तार हुँदा घरपरिवारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । रोजगारी वृद्धिले आयमा वृद्धि हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा घर परिवारको आर्थिक संलग्नता बढ्दा सरकारको राजश्व क्षमता पनि वृद्धि हुन जान्छ ।
सरकारको राजश्व क्षमताको प्रयोग पुनः पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदा समग्र आर्थितन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्छ । अनि बजारको खोजी हुन थाल्छ । परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि बढ्छ । जसको कारण देशको कुल उत्पादन वृद्धि हुन्छ र देशको प्रतिव्यक्ति आय पनि वृद्धि हुँदै जान्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ लाई हेर्ने हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलार्य तुलना गर्दा के भन्न सकिन्छ भने नेपाल एक पिछडिएको मुलुक हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम छ किनकि उत्पादन कम छ । उत्पादन कम छ कारण हामीद्वारा उत्पादित वस्तुहरुको खपत कम छ । अब आर्थिक वृद्धि सुधार्दै जाने हो भने उपभोग गर्न लायक वस्तुको उत्पादन नबढार्इ कुनै विकल्प रहँदैन । यसको लागि पुनः घरपरिवार, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अन्तरक्रियालाई गतिशील बनाउनुपर्छ । यस अन्तरक्रियालाई गति प्रदान गर्ने प्रमुख भूमिकामा सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति रहन्छ ।
आईएमएफले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने जीडीपी (पीपीए) को आधारमा प्रतिव्यक्ति आय कतारको १ लाख २८ हजार ७ सय २ अमेरिकी डलर रहेर उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा गनिन्छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा मकाउ र लक्जम्बर्ग रहेका छन् । जसको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ ।
सबै नागरिकले के बुझ्न जरुरी छ भने आर्थिक वृद्धिका लागि घर-परिवार र आर्थिक क्षेत्रको सहभागिता आर्थिक क्रियाकलापमा सधैं सक्रिय र तीव्र हुन जरुरी छ । यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न पूर्वाधारको विकासमा सरकारको उपस्थिति जरुरी हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलपाको तीव्र वृद्धि आन्तरिक उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सके प्रभावकारी रहन्छ । यसैकारण अन्तरराष्ट्रिय व्यापार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
के आर्थिक वृद्धि सहज छ ?
छैन । हो, आर्थिक वृद्धिको बाटोमा तत् तत् देशका आ-आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्व उपर्युक्त वर्षा र राजनीतिक अस्थिरता हिजो थियो होला । आज पनि यसको अवशेष बाँकी नै छ । साथै पूर्वानुमानित पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रशासनिक संरचना, विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई साँघुरो पारिदिएको छ ।
यस किसिमको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन सरकारले संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फ आर्थिक इकाइमा चलिरहने अन्तरक्रियालाई सहजीकरण गर्न सक्यो भने मात्रै देशले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्छ । नत्र भने देश चार-पाँच प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिबाट बाहिर निस्कन कठिन छ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 5:19:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 4:35:00 PM No comments:
नेपालको निजामती सेवा लुटतन्त्र (स्पोइल सिस्टम) वा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) के हो भन्ने स्पष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन । ऐन कानुन र संगठन हेर्दा योग्यता प्रणालीको निजामतीजस्तो देखिन्छ । सरकारका नीति कार्यक्रम लागू गर्दा भने लुटतन्त्र जस्तो देखिन्छ ।
कर्मचारीको पद र अधिकार तथा दायित्व कानुनले निर्धारण गरेको छ । यसर्थ प्रक्रियागत रूपमा भने योग्यता प्रणाली हो भन्न सकिन्छ ।
सरकारका नीति कार्यक्रम लागू गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार प्राप्त पदमा राजनीतिक इच्छाअनुसार कर्मचारी सरुवा गरेर पदस्थापन गरिन्छ । कर्मचारीको पद सानो ठूलो जे भए पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा निजामती सेवामा ऊ शक्तिशाली हुन्छ । आधार तलब समान पदको समान भए पनि कार्यालय, शाखा र कर्मचारीपिच्छे फरक निर्णय गरेर सरकारले कुनै कर्मचारीलाई आधार तलब मात्र उपलब्ध गराउँछ भने कुनै कर्मचारीलाई भत्ता र सुविधा गरी तलबको चार गुणासम्म उपलब्ध गराउँछ । यसरी हेर्दा लुटतन्त्र जस्तो देखिन्छ ।
योग्यता प्रणालीमा निजामती सेवाको मूल जिम्मेवारी राजनीतिक तहले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । तर त्यो निर्णय विधिसम्मत निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । साथै उच्च कर्मचारीले राजनीतिक तहलाई नीतिगत निर्णयका लागि राय सुझाव दिन्छ । निर्णय जे–जस्तो भए पनि सरकारको निर्णयअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा निजी सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ, परामर्शदातालगायत विभिन्न नाममा राजनीतिक तहले सोझै करारमा व्यक्ति नियुक्ति गरेर उनीहरूसँग रायसल्लाह लिने र सोहीअनुसार कर्मचारीको सरुवा पदस्थापन, नीति, कार्यक्रम र बजेट परिचालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ ।
काम नहुनुपछाडिको एउटा गम्भीर कारण अख्तियार हो, किनकि नेताहरूले आदेश दिन्छन् तर कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्छ तर भोलि केही उँचनीच हुन गए नेतालाई अख्तियार लागेका कमै उदाहरणहरू छन् तर कर्मचारी भने उम्कन सक्दैन । त्यसैले कर्मचारी प्रक्रियागत तथा कानुनी रूपमा सोच्छ भने नेता भावनात्मक रूपमा सोच्छन् । नेतालाई भावनात्मक कुरा गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने छुट छ, तर कर्मचारीले भावनामा बगेर काम गर्न सक्दैन, उसलाई ऐन, नीति, नियम, कानुन तथा प्रक्रियाले डोर्‍याउँछ ।
सर्वप्रथम नेपालमा राजनीति र प्रशासनलाई छुट्याउने हो या प्रशासनलाई राजनीतिकै भागका रूपमा अन्तरघुलित गर्ने हो ? कर्मचारीतन्त्र कुन मोडलको हो भन्ने राजनीतिक तहले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, बढुवामा राजनीतिक तहको अधिकार र दायरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका संगठनले कर्मचारकिो सरुवा–बढुवामा कतिसम्म हात हाल्ने, किन हात हाल्ने, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको आधार र मापदण्ड स्पष्ट गरिनुपर्छ । कार्यालय र पदहरूमा रहेको अधिकारको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन राजनीतिक तहबाट विधिसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् बहुराष्ट्रवादले उल्लेख्य प्रगति गरे पनि विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ । सन् १९९० को दशकअघि अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली युनियन र जापानले विश्व अर्थतन्त्रमा पकड बनाएका थिए । विश्व व्यापार सम्झौता तथा विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकमा पनि उनीहरूकै प्रभाव थियो ।
सन् १९९० पछि विश्वमा उदीयमान अर्थतन्त्रको उदय भयो । यस्तोमा सबैभन्दा ठूलो उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा चीन अगाडि आयो । विश्व व्यापार संगठनका सदस्यका रूपमा अन्य विकासशील राष्ट्र पनि जोडिएपछि पुनर्संरचनाको थप आवाज उठे ।
विश्व व्यापार व्यवस्था सुधारका लागि १४ वर्षको प्रयासपछि भएको दोहा वार्ताको असफलतासँगै थप समस्या देखिन थाले । सन् २०१० पछि विश्व व्यापार संगठनको संरचनाबाहिर रहेर क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता हुन थाले ।
‘जिनेटिक इन्जिनियरिङ’, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, रोबोट सैन्यबलजस्ता नयाँ प्रयोगलाई पनि नियमन तथा निश्चित व्यवस्थामा बाँध्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।
विश्व व्यापार व्यवस्थाका सन्दर्भमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र नियममा रहेर सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य उपयुक्त रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 3:26:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 2:42:00 PM No comments:
समाज भनेकै वार्तालापको सञ्जाल न हो ! यही सञ्जालमा सभ्यता हुर्कन्छ, संस्कृति निर्माण हुन्छ, परम्परा बसालिन्छन्। कला र साहित्य सिर्जना हुन्छ। भौतिक, सांंस्कृतिक, प्राज्ञिक सबै किसिमको समृद्धि हुर्किने संवादमै हो।
लोकतन्त्र छ कुनै देशमा भने राज्यले त्यो बोली सुन्छ।
‘सेलेक्टिभ् म्युटिज्म’ भन्ने मनोरोगबाट ग्रस्त व्यक्ति खासखास परिस्थितिमा बोल्नै सक्तैन । उसलाई बोल्ने मन छ, शरीरका स्वरयन्त्रहरू ठीकठाक छन्, बोल्ने कुरा पनि नभएको हैन, अन्यत्र ऊ बोल्छ पनि तर खास परिस्थितिमा वा खास मान्छेका सामु भने उसको बोली नै फुट्दैन।
सरदर प्रतिव्यक्ति आयले सबै वर्गलाई समान रूपमा समेट्न सक्दैन ।
नीतिले मात्र लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । नीतिको परिपूरक कार्यक्रम चाहिन्छ ।
नेपालले पीडा भोग्नुपरेको अर्को पक्ष व्यापार घाटा हो । अहिले नेपालले १२ रुपियाँको सामान आयात गर्यो भने केवल एक रुपियाँको सामान निर्यात नै व्यापार घाटाको प्रमुख कारण हो ।
सबभन्दा राम्रो र बजारको खाँचो नभएको निर्यातयोग्य उत्पादन हो, जलविद्युत् ।
विप्रेषणले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई रेखाबाट माथि उकास्न काम लाग्ला तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।
नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा कर्मचारीको ठूलो भूमिका रहन्छ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 1:47:00 PM No comments:
टालटुले विकासका व्याख्याता-सचिन घिमिरे
वर्तमान विश्व व्यवस्थाले सिर्जना गरेको असमानतापूर्ण अर्थराजनीतिक सम्बन्धलाई परनिर्भरता सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने फ्रेन्च–इजिप्टियन दार्शनिक प्रोफेसर समिर अमिन
प्रोफेसर अमिनले आफ्नो जीवनकालमा प्रस्तुत गर्नुभएका अधिकांश मान्यता तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषण नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका सवालमा सान्दर्भिक देखिन्छ
विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरण जस्ता अवधारणाहरू ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र दक्षिण एसियाजस्ता राष्ट्रहरूको सवालमा झुठको खेती भएकाले उनी यस्ता अवधारणाले केही शक्तिशाली राष्ट्रको सिन्डिकेटले सिर्जना गरेको ‘सोसल ट्रयाजेडी’ अर्थात सामाजिक दु:खान्त हो भन्ने तर्क गर्थे ।
असीको दशकदेखि संरचनागत समायोजनको नाममा उदारवाद र बजारवादको मन्त्रलाई विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आँखा चिम्लिएर अँगालेको कारण स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक विषयवस्तु बजार नियन्त्रित बन्न गएको हो, उनको धारणा थियो ।
संरचनागत समायोजन कार्यक्रम भनेको कङ्गोजस्तो गरिब देशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अमेरिकाजस्ता धनी राष्ट्रहरूको स्वार्थलाई समायोजन गर्ने हो भन्ने उनको बुझाइ थियो । उनको विचारमा आर्थिक विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण जस्ता अवधारणा ‘नयाँ पुँजीको चरित्रलाई आत्मसात गर, नवउपनिवेशवादलाई स्वीकार, आफ्ना प्राथमिकता दबाएर राख’ भन्दै धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई लादेका मान्यतामात्र हुन् ।
अमिनले व्याख्या गर्नुभएको ‘लुम्पेन विकास’ अर्थात टालटुले विकासको अवधारणा नेपाली सन्दर्भमा कम्युनिष्ट सरकारले देखाइरहेको टालटुले समृद्धिसँग पनि स्पष्टै मिलेको देखिन्छ । उनका अनुसार आम मानिसको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्न गरिने बृहतर विकासको खाकाभन्दा पनि राजनीतिक स्वीकारोक्तिका लागि गरिबीको व्यवस्थापन गर्ने मोडलहरू लुम्पेन विकासका चरित्रभित्र पर्छ । विशाल जनअपेक्षा रोकथाम गर्दै जनमानसमा ‘केही त भइरहेको छ नि’ भन्ने भ्रम छर्नकै लागि टालटुले विकासका मोडलका हौवा बढी मात्रामा खडा गरिन्छ । जम्मा ३२ घरलाई लाभावान्वित हुने गोबर ग्यास प्रधानमन्त्री आफैं गएर उद्घाटन गरेका कार्यहरू उनले भनेजस्तै टालटुले विकासका राम्रा उदाहरण हुन् ।
अमिनका अनुसार जनजीविकाका लागि ठूलो कार्य गरेजस्तो देखिने पपुलिष्ट कार्यक्रमले जनतालाई भुलभुलैयामा भुलाइरहन्छ । वर्ग रूपान्तरणको प्रश्न धमिलो बनाउँदै आधारभूत तहमा हस्तक्षेप हुनेगरी सरकारले नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा जोड दिँदैन । उनका अनुसार जनअपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रगतशील शक्तिले मात्र रूपान्तरणकारी विकासका योजनामा तदारुकता देखाउन सक्छन् । अमिन अमूर्त पुँजीको अघि घुँडा टेकेर प्रगतिशील पार्टीका नेताहरू अमूर्त पुँजी व्यवस्थापन गर्ने कारिन्दामा सीमित भएकाले पुँजीवादको सामना गर्नसक्ने सशक्त जनपक्षीय शक्तिको आवश्यकता अझै देखिन्छ भन्ने तर्क गर्थे । ‘प्रगतिशील’ र ‘क्रान्तिकारी’ पार्टीको नेतृत्व गरेर आएकाको ठेकेदार, नाफाखोर व्यापारी र कालो बजारीहरूसँग अभिन्न मित्रता हुने नेपालजस्तो देशमा अमूर्त पुँजी प्रवाहले जनसरोकारसँग जोडिएका राजनीतिक निर्णयलाई कतिसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने यथार्थ मार्सी भोजनको ऐतिहासिकता र मेडिकल कलेजसम्बन्धी दृष्टान्तले नै छर्लंग पारिसकेका छन् ।
केन्द्रले सिमान्तलाई मात्र होइन, सिमान्तले केन्द्रलाई पनि उत्तिकै प्रभाव पार्ने हुनाले सिमान्तकृत राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहना मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गरेर केन्द्रले लादेको राजनीतिक सामरिक र आर्थिक चुनौतीसँग लड्नुपर्ने अमिन बताउँथे ।
वैकल्पिक आवाजको ऐक्यबद्धताका लागि वैकल्पिक विश्व प्लेटफर्म सिर्जना गर्दै प्रतिरोधको संस्कृति निर्माण गरेर पुँजीवादलाई धक्का दिनुपर्ने तर्क अमिनको थियो । यसका लागि उनले डिलिकिङ अर्थात विच्छेदीकरणको रणनीति प्रस्ताव गरेका थिए । यसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई आफ्नो प्राथमिकता अनुसार अघि सार्ने अवधारणालाई जोड दिन्छ । एकाधिकार पुँजीवादसँग प्रतिरोध गर्न ‘एन्टी क्यापिटालिष्टिक मेसिन’ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्दै विश्व सामाजिक फोरमको समेत नेतृत्व गरेका थिए, प्रोफेस अमिनले । तेस्रो विश्वका सिमान्तकृत वर्गले पनि विश्व व्यापारीकरणको फाइदा लिनसक्ने बनाउन जनपक्षीय शक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्थे उनी ।
आधुनिक औद्योगिक व्यवस्थालाई चुनौती दिनसक्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै विश्व बजारका नियमलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरिएको सार्वभौम कार्यक्रमको आवश्यकता देख्थे, उनी । यस्तो किसिमको वैकल्पिक औद्योगिक व्यवस्था कृषितन्त्रसँग निर्भर हुँदै बजारमुखीको स्वार्थका लागि अघि सारेको भन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।